Fiidiyeyaasha carruurta ee gabdhaha 3 sano jirka ah
Dumarka Ilmaha iyo daryeelka isaga
Dhaqdhaqaaqa jirka wuxuu muhiim u yahay carruurta da 'kasta. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la abaabulo cayaaraha mobile-ka ee caruurta, si ay u noqdaan kuwo faa'iido leh oo xiiso leh. Wiilasha badanaa waxay si fudud u helaan inay qabtaan shaqooyinka fasaxa noocan oo kale ah. Mid ka mid ah fursadaha loogu talagalay ciyaar firfircoon oo loogu talagalay gabadh 3 sano ah ayaa bixin karta fiidiyoow. Waxaa jira tusaalooyin loogu talagalay carruurta ugu da'da yar. Xajmiga cabbirkooda ayaa horeyba uga jira 25 qiyaasood.
Sidee loo doortaa fiidiyowga ilmo 3 sano ah?
Nasashada noocan ah waxay ka caawisaa koritaanka jirka guud ee ilmaha. Waxaa muhiim ah in fiidiyowyada carruurta ay leeyihiin nidaam rogrogaya. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad bedesho xajmiga, sababta oo ah lugta ilmaha ayaa si dhakhso ah u koreysa.
Hawsha ugu weyn ee waalidiinta markay iibsanaayaan waxay noqon doontaa inay doortaan kabaha roogga ah si ay barafka u keenaan raaxada ilmaha, laakiin isla markaa waxay ahayd mid si buuxda u badbaaday. Sidaa daraadeed, waxaa habboon in aad fiiro gaar ah u yeelato dhowr talooyin oo kaa caawin doona inaad doorato:
si aad u sameyso iibsigu wuxuu ku fiican yahay dukaamo khaas ah, kaas oo badeecad tayo leh la soo bandhigo;
fiidiyowga carruurta ee ku haboon gabdhaha 3 sano, inta badan waxay leeyihiin 3 lugood, mararka qaarkoodna waxay waalidku ka cabsi qabaan, laakiin xaqiiqda ah ilmaha yar ee doorashadani waa mid aad u fiican, maaddaama maneuverability uu hagaagayo;
In skates waa in ay noqdaan qulqul duuban gudaha, sababtoo ah taasi waxay hubinaysaa in ay fududahay in la dhaqo, waxayna sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad bedesho haddii loo baahdo;
sidoo kale waa in la fiiriyaa xaqiiqada ah in cagtu ay diiwaangeliso 3 sifo;
waxa ugu wanaagsan ee la sameeyo cunug waa in la raaco ilmaha, si aad u tijaabiso;
sida caadiga ah dukaamada waxaa jira dhowr nooc oo fiidiyowyada carruurta loogu talagalay gabdhaha 3 sano, sidaas daraadeed waa in ay isku dayaan dhammaan fursadaha fursadaha ay ku doortaan;
Cabbir ka dhigo kabaha cawska suufka.
Waalidiintu waa muhiim in la xasuusto in carruurta yaryari aanay had iyo goor u sheegin sida ay u raaxaystaan ​​tan ama tusaalahan iyaga loogu talagalay. Sababtoo ah waxaa habboon in si taxadar leh loo daaweeyo ilmaha. Ka dib markii la qiyaaso laba lakab oo roodh ah, u calaamadee calaacashda iyaga ku hay mudo ah. Haddii ilmuhu qabo raaxo darro, dadka waaweyni waxay awoodi doonaan inay arkaan tan. Ka dib markaad buuxiso, waa lagama maarmaan in la fiiriyo haddii lugta yaryar ay hoos u dhacdo ama ka baxdo. Haddii ay taasi dhacdo, macnaheedu waa in qaabkani aanu ku haboonayn.
Diyaarinta ilmaha ee dugsiga
Isku xirka carruurta 3 sano ah
Ciyaartoyda aan ciyaaraha la ciyaareynin gacmahooda
Miiska labiska carruurta
Kulannada dhalashada dhalashada
Sidee loo isticmaalaa raasumaalka umusha ilaa 3 sano?
Farshaxanno laga bilaabo abuurka qaraha ee carruurta
Sidee loo baraa ilmo inuu akhriyo 4 sano guriga?
Tartanka loogu talagalay carruurta 5 sano jirka ah
Fasallada loogu talagalay carruurta 3-4 sano
Habka Glen Doman
Carruurta Britney Spears
Cabitaanka qalliinka kadib
Qurxiyo qurux badan
Sidee loo daryeelaa strawberries dayrta?
Miyaan uur yeelan karaa uur la'aan la'aanteed?
Iska iibso naftaada
Casharada style - sida loo barto dharka?
Xirfadda farsamooyinka - layliyada luminta miisaanka
Gawracatada - daaweynta daaweynta dadweynaha
Sidee loo isticmaalaa kiriimka wajiga?
Jimicsiyada neefsashada ee miisaanka luminta iyo soo kabashada
Cudurka kalyaha ee polycystic
Candidiasis ee xiidmaha
Cudurada dhirta qoyaanka
Mugheey cunto cuno
Gabadha nasiib darrada ah ee Salvador Dali waa inay bixiso qarashka jidhkiisa
Kaya Gerber ee bikini wadahadal ku saabsan xeerarka quruxda badan ee nolosha
Benedict Cumberbatch wuxuu ka ciyaari doonaa macalimiinta "Melrose" geesiga riyadiisa
Lactostasis - calaamadaha